စွဲတွင်အကူးအပြောင်းကာလ - ပုံမှန်မဟုတ်သောရွေ့လျားမှု၊ hedonic dysregulation နှင့် aberrant learning (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ရှိသဘာ ၀
စွဲလမ်းအတွက်ပြောင်းလဲ: အထစ်အငေါ့လှုံ့ဆျောမှု, အ hedonic dysregulation, နှင့်ထစ်အငေါ့သင်ယူမှု (2016) ပါဝင်သောတစ်ဦးက "ယာယီစဉ်ဆက်" ယူဆချက်
Med ယူဆချက်။ 2016 သြဂုတ်; 93: 62-70 ။ Doi: 10.1016 / j.mehy.2016.05.015 ။
Patrono E ကို1, Gasbarri တစ်ဦးက2, Tomaz ကို C3, Nishijo H ကို4.
အဆိုပါ "မက်လုံးပေး - sensitization" သီအိုရီ
အဆိုပါ "hedonic dysregulation" သီအိုရီ
အဆိုပါ "အလေ့အထ -based သင်ယူမှု" သီအိုရီ
အဆိုပါပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆျောမှု, အ hedonic dysregulation နှင့် aberrant သင်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်။ "ယာယီစဉ်ဆက်" ယူဆချက်
မူးယစ်ဆေးစွဲ "ယာယီစဉ်ဆက်" ယူဆချက်၏အာရုံကြော -bio- ဇီဝကမ္မနောက်ခံ
တစ် ဦး အလေ့အထ - သင်ယူမူးယစ်ဆေးဝါးအပြုအမူ၏အာရုံကြောအခြေခံ
“ အစားအစာစွဲ” ဟူသောဝေါဟာရ၏တရားဝင်မှု
အစားအစာ - ညွှန်ကြားထားအပြုအမူ၏ Electrophysiological အခြေခံ
စွဲတာဟာနာတာရှည်မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ၎င်းတွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်စသည့်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်မှုများကို encode လုပ်သည့် ဦး နှောက်andရိယာများနှင့်ဆားကစ်များစွာပါဝင်သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကို“ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါဗေဒပုံစံ” ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သောအပြုအမူများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်း၊ အပြုသဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးများရှိနေခြင်းနှင့်ထိုအပြုအမူများကိုလိုက်စားခြင်းနှင့်ယူဆရန်အားကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ တ္ထုများ။ ကွဲပြားခြားနားသောသီအိုရီ (၃) ခုသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုအပေါ်စမ်းသပ်သုတေသနပြုရန်လမ်းညွှန်ပေးသည်။ ဤသီအိုရီတစ်ခုချင်းစီသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ၏ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုရှင်းပြရန်အဓိကသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သော aberrant motivation, hedonic dysregulation နှင့် aberrant အလေ့အထကိုလေ့လာခြင်းကဲ့သို့သောတစ်ကိုယ်ရေအင်္ဂါရပ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ဤလေ့လာမှု၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာသီအိုရီသုံးခု၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အရထိန်းချုပ်ထားသောအသုံးပြုမှုမှစွဲလမ်းစေသောအရာဝတ္ထုများကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာယူဆချက်အသစ်များကိုတင်ပြရန်ဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းသောတ္ထုများအလွဲသုံးစားမှုမှအသုံးပြုပါ။ မကြာသေးမီကသဘာဝနှင့်ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်ဘုံအာရုံကြောစနစ်များကိုအသက်ဝင်စေခြင်းအားဖြင့်အရက် - အစာစားခြင်းမမှန်သည့်ရောဂါများကိုစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ဒုတိယရည်မှန်းချက်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်“ အစားအစာစွဲခြင်း” အကြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဇီဝကမ္မဖြစ်တည်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်အထောက်အထားများကိုတင်ပြရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ စိတ် ၀ င်စားဖွယ်မေးခွန်းများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်“ အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု” အကြားသီအိုရီ / စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဇီဝကမ္မဇီဝဗေဒနှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်များမှအစသုံးစွဲမှုမှစွဲသောအရာများကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းနှင့်တူညီသော“ ယာယီဆက်တိုက်” တလျှောက်ကူးပြောင်းခြင်းတူညီမှုတို့မှစတင်သည်။ တ္ထုပစ္စည်းများကိုမိမိဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှုမှကူးယူစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းကိုသရုပ်ဖော်သည့်အချိန်အခါများအပေါ် အခြေခံ၍ ကုထုံးဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာအသစ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကုထုံးဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာအသစ်များကိုစစ်ဆေးပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါး / အစားအစာစွဲ, အကွောငျးရငျး, အလေ့အထသင်ယူမှု, Hedonic dysregulation, အသွင်ကူးပြောင်းရေး, ဆုလာဘ်စနစ်က
လက်တင်“ addictus” (“ ကျွန်မှကြွေးမြီ” သို့မဟုတ်“ လက်အောက်ခံ”) မှစွဲလမ်းမှုသည်နာတာရှည်မလှူမရှားဖြစ်ရသည့်အပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်လူများအားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုပိုမိုများပြားစေသည်။ ၎င်းသည်ဆု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများစွာကို encode လုပ်သော ဦး နှောက်andရိယာများနှင့်ဆားကစ်အတော်များများပါဝင်သောနာတာရှည်ရောဂါဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းသူတစ် ဦး သည်သူ၏စွမ်းအင်အများစုကိုအလွဲသုံးစားမှုရှာဖွေခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ရယူခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအပေါ်သူ၏တစိတ်တပိုင်းအာရုံစူးစိုက်သည်။ နာမကျန်းမှုများ၊ ဘဝပြfailနာများနှင့်ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်မှုများကြားမှပင်ဤသို့ဖြစ်ပျက်တတ်သည်။
မကြာသေးမီက DSM-V တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သောအပြုအမူများထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနေခြင်းနှင့်ထိုအပြုအမူများကိုလိုက်နာခြင်းတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို“ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်း၏ရောဂါဗေဒပုံစံ” အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ တ္ထုများယူဆရန်လှုံ့ဆော်လှုပ်ရှားမှု  ။ ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်း၊ လိုက်စားခြင်းနှင့် ၀ တ္ထုများယူဆရန်ပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုရှိသောလှုပ်ရှားမှုများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှဇီဝ - မော်လီကျူးအဆင့်အထိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ရနိုင်သည်။
ကွဲပြားသောသီအိုရီ (၃) ခုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုရန်လမ်းညွှန်ပေးသည်။ , , ] ဤသီအိုရီတစ်ခုချင်းစီသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ၏ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုရှင်းပြရန်အဓိကသရုပ်ဆောင်အဖြစ်သီးသန့်အင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည့် aberrant motivation , hedonic dysregulation  နှင့် aberrant အလေ့အထလေ့လာခြင်း  တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ဤလေ့လာမှု၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာကွဲပြားခြားနားသောသီအိုရီသုံးခု၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အရထိန်းချုပ်ထားသောအသုံးပြုမှုမှစွဲလမ်းသောအရာများအားအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာယူဆချက်အသစ်များကိုတင်ပြရန်ဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းသောတ္ထုများအလွဲသုံးစားမှုမှအသုံးပြုပါ။
ဤနေရာတွင်ကျပန်းအသုံးပြုခြင်းမှဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုသို့အလွယ်တကူကူးပြောင်းခြင်းသို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုအဓိကကြိုးစားသည့်အဓိကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယူဆချက် (၃) ခုကိုခြုံငုံမိသည်။ မက်လုံးပေးခြင်း - အာရုံခံနိုင်ခြင်းဆိုင်ရာသီအိုရီ၊ hedonic dysregulation သီအိုရီနှင့်အလေ့အထအခြေခံသောသင်ယူမှုသီအိုရီ
ဤသီအိုရီနှင့်အညီအလွဲသုံးစားမှုဖော်ထုတ်ခြင်းကိုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများသည် ဦး နှောက်တွင်ပိုမိုထိရောက်သော (သို့) အလိုရှိသောအရာများဖြစ်လာစေရန်“ sensitivity” ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာများ၌ပင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရရှိရန်ကတိက ၀ တ်ပြုခြင်း၊
စိတ်ပညာတွင်လှုံ့ဆော်မှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏အပြုအမူကိုရည်မှန်းချက်တစ်ခုသို့လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်သောအတွင်းပိုင်းအခြေအနေဟုသတ်မှတ်သည်။ စွဲလမ်းမှုအပြုအမူကိုလမ်းညွှန်ပေးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအယူအဆများဖြင့် ဦး နှောက်စနစ်များတွင်မည်သည့်အရာပါဝင်သည်ကိုနားလည်ရန်လေ့လာနိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း / ရယူခြင်းအပြုအမူနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း (ပစ္စည်းနှင့်ဆက်နွယ်သောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့်) တစ်ကိုယ်ရည်လှုပ်ရှားမှုစနစ်နှင့်ပြောင်းလဲလိုသောစိတ်ဆန္ဒပြောင်းလဲခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်ကဤဖြစ်ရပ်အား“ မက်လုံးများ - အာရုံခံစားမှုသီအိုရီ”  နှင့်ရှင်းပြခဲ့သည်။ သူတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုနာတာရှည်အသုံးပြုခြင်းသည်အကျိုးခံစားခွင့်စနစ်အတွင်းအာရုံကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုတိုးမြှင့်စေပြီး၊ စနစ်အားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများသို့အသိပေးသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး - လှုံ့ဆော်မှုတွဲဖက်မှု၏တိုးမြှင့်ခြင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအတွက် "အကူးအပြောင်း" ကိုထုတ်လုပ်, လှုံ့ဆော်မှုများ၏မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုတိုးပွားစေပါသည် အလိုရှိ သူတို့မရကြဘူးသော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ ကဲ့သို့ သူတို့ထံမှ  (သဖန်းသီး။ 1). သဖန်းသီး။ 1 ဘယ်လိုပြသ like နှိပ် နှင့် ချို့တဲ့ မှတ်ဥာဏ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းခြားနားချက်မှတဆင့်ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ / ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းများကိုလိုက်နာနိုင်သည်။ ဒီသီအိုရီကလူတွေကိုစွဲလမ်းစေတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအလွန်အကျွံရှာဖွေခြင်း၊ ပြင်းထန်သောတဏှာခြင်းနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းစသည့်ကဏ္aspectsများစွာကိုရှင်းပြထားသော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ရန်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအားမစွမ်းနိုင်ခြင်း၊ အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်၎င်း၏ကြာရှည်အသုံးပြုမှု၏ Self- အဖျက်သဘောသဘာဝရှိနေသော်လည်း။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုသည်ရှုပ်ထွေးသည့်စိတ်ပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးစွဲစေသောအပျော်အပါး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောအမှတ်တရများနှင့်“ အကြိုက်” လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ခံစားမှုစရိုက်များ , ] “ လိုသော” (ဥပမာမက်လုံးပေးလိုစိတ်) နှင့်“ အကြိုက်” နှစ်ခုလုံး၏မညီမျှမှုသည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်အခန်းကဏ္ have ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ဤသီအိုရီသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်သောအပျော်အပါး၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း (သို့) အလေ့အကျင့်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအပြုအမူအတွက်အသုံးပြုခြင်း၏အကြောင်းပြချက်များအဖြစ်ငြင်းပယ်ခြင်းမပြုသော်လည်း၊ ချို့တဲ့, ပိုမိုကောင်းမွန်စွဲချက်အတွက်မလှူနှင့် relapse ရှင်းပြနိုင်ဘူး.
မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု၏မက်လုံးပေး salience မော်ဒယ်။ “ Liking” နှင့်“ wanting” တို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစနစ်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အေးစက်လှုံ့ဆော်မှု (CS) နှင့်ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (ယူအက်စ်) သည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ NAc နှင့် neostriatum မှ DA စီမံချက်များလိုအပ် (လှုံ့ဆျောမှု၏မက်လုံးပေး - အဓိကရှုထောင့်) generate ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် DA သည် NAc နှင့် neostriatum ကိုတိုက်ရိုက်မနှစ်သက်သော (hedonia) နှင့်ဆက်စပ်မှု - သင်ယူခြင်းကိုဆုိုသည်။ စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုတို့ကိုကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်ရန်ထပ်မံသိမြင်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်“ ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း” နှင့်“ လိုလားခြင်း” အခြေခံစိတ်ခံစားမှုများကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သည်။
ဤသီအိုရီအရမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းသို့ကူးပြောင်းခြင်းသည်အဆင့် ၃ ဆင့်ကိုဖြတ်သန်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ .
စွဲလမ်းမှုတွင်“ အာရုံစူးစိုက်မှု” ၏အခန်းကဏ္ “ကို“ မက်လုံး - အဓိကကျသည့်ပြည်နယ်” သို့ချောမွေ့စွာပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သောအားတက်ဖွယ်မြင့်မားသည့်ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြင့်ကန ဦး အသုံးပြုမှုကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည်။10] ။ အပျက်သဘောဆောင်သောအားဖြည့်ခြင်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်ဆုတ်ခွာစေသည့်လှုံ့ဆော်မှုများမှထုတ်လွှတ်မှုကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုရုပ်သိမ်းခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအရေအတွက်ကိုတိုးပွားစေသည်။3] ။ dysphoria နှင့်အဆင်မပြေမှုများကိုရှောင်ရှားရန်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများသည်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်။11] ။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများသည်ကျပန်းအသုံးပြုခြင်းမှစွဲလမ်းခြင်းသို့ဆက်လက်သွားကြပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတွင်“ ကူးပြောင်းခြင်း” ကိုအားပေးသည့်အချက်များသည်အစောပိုင်းကာလများ၌ထိုးထွင်းသိမြင်မှုမှပြောင်းလဲခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်း (ပြင်းထန်သောနှင့်အစွမ်းထက်သောဆန္ဒ) သည်စွဲလမ်းမှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ has မှပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းများသုံးခုတွင်ပါဝင်သည်။10] ။ အဆင့်သုံးဆင့်သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာနက်ရှိုင်းခြင်း၊ ဆုလာဘ်စနစ်၏ hedonic homeostasis ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အသုံးပြုသူကိုစွဲလမ်းမှုဖြစ်စေသည်။, ] (သဖန်းသီး။ 2). သဖန်းသီး။2ထိပ်ဆုံးမှအောက်သို့စွဲနေသောသံသရာကိုဖော်ပြထားသည်မှာ“ သူမ၏ဘဝသည်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်လူတို့နှင့်ဆက်နွယ်မှုများရှိသော်ငြားလည်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှု” အဆင့်တွင်ရှိသည်။ အဆိုပါ "မူးရူး / မူးယစ်" အဆင့်တွင်တူညီသော hedonic အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားရန်အလို့ငှာကြီးမားသောပမာဏ၏လိုအပ်ချက်ကိုသတ်မှတ်။ “ ဆုတ်ခွာခြင်း / အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု” ဆိုသည်မှာဆေးဝါးကုသမှုစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သည် (ဥပမာမက်သဒုံး၏ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာအသုံးချမှု) လိုအပ်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစဉ်ဆက်မပြတ်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုရည်ညွှန်းသည်။
အပေါ်မှအောက်သို့လှည့်ပတ်နေသောစက်ဝိုင်းထဲ၌ ၀ င်ရောက်ခြင်း။ ပုံကြမ်းသည်အထက်မှအောက်စွဲစွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြသည်။ တခါတရံတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်အလွဲသုံးစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး၊ နောက်မှပြန်ဆုတ်သွားနိုင်သည်။ ယင်းကိုအချက် ၃ ချက်ဖြင့်ရှင်းပြသည် -“ အလုပ်ရှုပ်နေခြင်း / မျှော်လင့်ခြင်း”၊ “ မူးယစ်ခြင်း / မူးယစ်ခြင်း” နှင့်“ ရုပ်သိမ်းခြင်း / အပျက်သဘောဆောင်သော” အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဤအဆင့်သုံးဆင့်သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးပိုမိုပြင်းထန်လာခြင်း၊ ဆုလာဘ်စနစ်၏ hedonic homeostasis ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိခြင်းနှင့်စွဲခြင်းဟုလူသိများသည့်ရောဂါဗေဒအခြေအနေသို့ ဦး တည်စေသည်။
hedonic dysregulation သီအိုရီသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၏အဆင့်အတန်းမညီမျှမှုတစ်ခု၏အဓိကအခန်းကဏ္consideringကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကဲ့သို့သော“ အထက်မှအောက်သို့စက်ဝိုင်းစီးဆင်းမှု” သို့ကူးပြောင်းခြင်းလမ်းကြောင်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြသည်။3]. သို့သော်၎င်းသီအိုရီအရမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၏အခြားအဓိကအင်္ဂါရပ်များဥပမာအားဖြင့်ပစ္စည်းအားပုံမှန်မဟုတ်သောအာရုံခံစားမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းကိုရရှိရန်ပကတိအပြုအမူများကိုရှင်းလင်းစွာရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ mesolimbic ဆုလာဘ် circuit သည်မူလကမူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်သက်ဆိုင်သော hedonic impact ကိုရိုးရှင်းသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ မကြာသေးမီကဤ circuit သည် function ကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်ဟုယူဆရပြီး၊ .
အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအလွယ်တကူမရနိုင်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသိုလှောင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံသုတေသနသည်ဤအချက်ကိုအထူးအလေးထားခဲ့သည်။13] ။ ဤအယူအဆသည်တိကျသောအပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကြောင့်ထိခိုက်လွယ်မှုသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တိရိစ္ဆာန်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း၊ တကယ်တော့မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သောလှုံ့ဆော်မှုများသည်အပြုအမူများအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။, ]. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုအမူသည်မူးယစ်ဆေးဝါးမကူးစက်မီမတိုင်မီဖြစ်ပွားသောကြောင့်၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆေးဖက်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုမထိခိုက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။16]. မူးယစ်ဆေးဝါးကိုမရောင်းသည့်အခါမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းအပြုအမူသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်းကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုအမူသည်“ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များ” ၏အကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်အပေါ်မူတည်နေသည်ဟူသောအငြင်းပွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း / ရယူခြင်းအပြုအမူသည်တိုက်ရိုက်အချက်များအပေါ်တွင်သာမက၊ အလွန်ရှုပ်ထွေးသောသိမှုဆိုင်ရာအာရုံစူးစိုက်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်ချက်၊ ဆုလာဘ်မျှော်မှန်းချက်အားအတည်ပြုခြင်း၊ ဆက်နွယ်သောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအမှတ်တရများ၊ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်နေသောအခြေအနေများကိုစစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့သောအခြားသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ၊12] ။ တိရိစ္ဆာန်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း / ရယူခြင်းအပြုအမူသည် cue နှင့်ဆက်စပ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း၏ ဦး နှောက်ယန္တရားကိုလေ့လာရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ ထို့အပြင် cue-related မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းကိုလျော့နည်းစေလိမ့်မည်ဟုအသစ်သောအလားအလာကုသမှုကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်လည်းအသုံးဝင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအလွဲသုံးစားမှုအထိဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိစေကာမူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုရှာဖွေ / ရယူခြင်းသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ အလိုဆန္ဒသည်လိုအပ်လာသောအခါဘာသာရပ်သည်သူသို့မဟုတ်သူမအားပစ္စည်းများကိုယူဆောင်စေသည့်မတူညီသောအပြုအမူများကိုပြုမူသည်။ “ ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည့်အပြုအမူ” နှင့်“ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း” သည်“ ကိရိယာတန်ဆာပလာများသင်ယူခြင်း” နည်းလမ်းနှစ်မျိုးကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ပထမနည်းလမ်းမှာရရှိလာသောရလဒ်များမှအလျင်အမြန်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ဒုတိယနည်းသည်ပိုမိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများထက်ယခင်ကထက် ပို၍ လှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်ဖြစ်စေသည်  ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏စိတ်ပညာသည်ပထမပြောင်းလဲမှုကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ဒုတိယတစ်ခုကိုရောဂါဗေဒအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ဤအပြုအမူများတွင်“ ကူးပြောင်းခြင်း” ကိုဖော်ထုတ်သည်။
Everitt သည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုပစ္စည်း၏ကန ဦး နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောအသုံးပြုမှုမှအသွင်ကူးပြောင်းမှုအဆင့်များစွာ၏နောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။, , ] (သဖန်းသီး။ 3). သဖန်းသီး။3မူးယစ်ဆေးစွဲမှတဆင့်အောက်ပါအဆင့်များဖော်ပြသည်။ ပစ္စည်းကို၎င်း၏မက်လုံးဖြစ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်မိမိဆန္ဒအလျောက်ယူသောအခါရှာဖွေခြင်း - အပြုအမူသည်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်းမှတစ်ဆင့်“ အလေ့အထ” ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်လှုံ့ဆော်မှု - တုံ့ပြန်မှုယန္တရားတစ်ခုဆာပအပြုအမူ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အားဖြည့် (conditioned reinforcer) အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်လှုံ့ဆော်မှု (ပစ္စည်း) ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရယူခြင်းအပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းသည်“ ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည့်အပြုအမူ” အဖြစ်စတင်နိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်“ ပကတိအပြုအမူ” ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်၎င်းသည်“ အလေ့အထအပြုအမူ” အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးအလေ့အထအပေါ် အခြေခံ၍ သင်ယူမှုပုံစံ (အလေ့အကျင့်အခြေပြုသင်ယူမှု) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။, , ].
အသုံးပြုမှုကနေတ္ထုများအလွဲသုံးစားမှုအထိခြေလှမ်းများကိုအောက်ပါ။ Everitt နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအဆိုအရမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုသည်အဆင့်ဆင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေများသည်အားဖြည့်ပစ္စည်းများ၏စားသုံးမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးသွားသည့်အထိစွဲလမ်းသော ၀ တ္ထုများကိုကန ဦး၊ ။ အထူးသဖြင့်၎င်းပစ္စည်းအား၎င်း၏မက်လုံးဖြစ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ဆန္ဒအလျောက်ယူသောအခါရှာဖွေခြင်း - အပြုအမူသည်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်းမှတစ်ဆင့်“ အလေ့အထ” ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်လှုံ့ဆော်မှု - တုံ့ပြန်မှုယန္တရားတစ်ခုဆာပအပြုအမူ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အားဖြည့် (conditioned reinforcer) အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်လှုံ့ဆော်မှု (ပစ္စည်း) ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရယူခြင်းအပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
အဓိကသီအိုရီ (၃) ခုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမှုနယ်ပယ်တွင်စမ်းသပ်သုတေသနပြုရန်လမ်းညွှန်ပေးသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ယူရန်“ ထုံးစံအတိုင်းလှုံ့ဆော်မှု” သည်စွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြပြီး“ လိုချင်ခြင်း” သည်စွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်ဟုယူဆသည်။ hedonic dysregulation သီအိုရီသည်အသုံးပြုမှုမှမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုအထိအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းလာခြင်းကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ hedonic homeostasis ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအလေးထားသည်။ အလေ့အထအခြေခံသည့်သင်ယူမှုသီအိုရီသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း၊ အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းတွင်ရှုပ်ထွေးသောအသုံးပြုမှု / အလွဲသုံးစားမှုကူးပြောင်းခြင်းကိုရှင်းပြရန်အလေ့အထဖြစ်လာသည့်အဓိကကျသောသင်ကြားမှုဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အခန်းကဏ္highကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ လိုချင်တာ”.
ယခုလေ့လာမှုသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏အဓိကသီအိုရီ (၃) ခုကိုစည်းမျဉ်းသစ်တစ်ခုမှဆန်းစစ်ရန် ရည်ရွယ်၍“ ယာယီစဉ်ဆက်ဆက်နွယ်မှု” ၏သီအိုရီဆိုင်ရာယူဆချက်များမှတဆင့်၊ “ ပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှု”၊ ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုခြင်းမှမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုရှင်းပြရန်အတူတကွအိပ်ပါ (သဖန်းသီး။ 4). သဖန်းသီး။4အဓိကအင်္ဂါရပ်သုံးခုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုမှမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းအထိတစ်ခုတည်းသော“ ယာယီစဉ်ဆက်မပြတ်” အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်တစ်ချက်ကိုပြသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏သီအိုရီ (၃) ခုအနက်တစ်ခုချင်းစီ၏အခန်းကဏ္assessedကိုစာပေများစွာကကောင်းစွာအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်တိုးတက်သောပြောင်းလဲမှုကိုအလေ့အထဖြင့်မောင်းနှင်ခြင်းမှလှုံ့ဆော်မှုဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း / အပြုအမူများသို့ ဦး တည်သွားသည်ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ Pavlovian-instrumental transfer (PIT) ဒီဇိုင်းတွင်အခြေအနေနှစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားသည် - ၁။ Pavlovian ဖြစ်စဉ်များသည်လှုံ့ဆော်မှု (S) နှင့်အင်အားဖြည့် (R) အကြားရှိနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုအထိခိုက်မခံမှုကိုသတ်မှတ်သည့် Pavlovian ဖြစ်စဉ်များ; (၂) တက်ကြွသောတုန့်ပြန်မှုများ (R) နှင့်ရလဒ်များ (အို) အကြားဖြစ်နိုင်ခြေကိုအထိခိုက်မခံသောပကတိအပြုအမူများ။, ] ။ အာရုံကြော - ဇီဝကမ္မဇီဝကမ္မဗေဒအရ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း / ယူခြင်းအပြုအမူကို ventral မှ dorsal striatal ထိန်းချုပ်မှုသို့တိုးတက်သောပြောင်းလဲမှုနှင့်ကိုက်ညီသည်။12] ။ ထို့ကြောင့်ထူးခြားသော“ ယာယီကာလဆက်မပြတ်” ကိုစဉ်းစားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ (၁) ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစဉ်အတွင်းအဆင့်ဆင့်ပုံမှန်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရလေ့ကျင့်မှုပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊ “ hedonic dysregulation” ကိုတက်ကြွစေပြီး (၂) တဖြည်းဖြည်း aberrant သို့ ဦး တည်စေသည်“ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဓိကကျသည့်အချက်များဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့သိသညျ့အတိုငျး "ယာယီစဉ်ဆက်" အယူအဆအားဖြင့်သီအိုရီသုံးခုကိုတစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းမြင်နိုင်သည့်အထောက်အထားမရှိပါ။ လူ့နှင့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများစွာကဆုလာဘ်သည်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ has မှဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။, ] ။ ထို့အပြင်အချိန်ပြတင်းပေါက်များနှင့် "ဆုနှုန်းထားများ" အေးစက်များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, DA အာရုံခံဆဲလ်ဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်။ ယာယီသတင်းအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အရေးပါပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ လက်တွေ့အဆင့်တွင်၎င်းသည်ယာယီအသုံးပြုခြင်း မှနေ၍ ဆေးဝါးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုအလွဲသုံးစားမှုအထိယာယီစဉ်ဆက်မပြတ်တစ်လျှောက်မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မည်၊ နှင့်ရောဂါဗေဒမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေနေခြင်း / ယူဆောင်လာသည့်အပြုအမူ၏သောင်းကျန်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်ကုထုံးဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာအသစ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်လည်းအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လှုံ့ဆော်မှု၊ hedonic dysregulation နှင့်အလေ့အထကိုအခြေခံသည့်သင်ကြားမှုကိုသီးခြားဖြစ်သောရှုပ်ထွေးသောမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူ၏အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
က "ယာယီစဉ်ဆက်" ယူဆချက်၏မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့အချိန်ဇယား။ အဓိကအင်္ဂါရပ်သုံးခုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ပထမဆုံးတွေ့ဆုံရာမှမူးယစ်ဆေးစွဲသူများအထိတစ်ခုတည်းသော“ ယာယီဆက်တိုက်” တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ဇယားကိုဖော်ပြသောပုံကြမ်းသည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်း neurobehavioral အပြောင်းအလဲများ hedonic dysregulation အပေါ်နှင့်တစ် ဦး အလေ့အထ - သင်ယူမှုဖြစ်ပေါ်နေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တန်ဖိုးကို၏ကိုယ်စားပြုမှုအပေါ်ပြုမူနှင့်သိသိသာသာမူးယစ်ဆေးဝါးစားသုံးမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များအပြင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း / ယူခြင်းအပြုအမူတွင်လုပ်ဆောင်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာ circuit များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာမှုများစွာကဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသည်“ cortico-subcortical” ဦး နှောက်andရိယာများနှင့်“ မူးယစ်ဆေးဝါးအားဖြည့်ခြင်း” တွင်ပါ ၀ င်သော neurotransmission circuit များကိုလှုံ့ဆော်သည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ တစ်ခုချင်းစီ၏သီအိုရီတစ်ခုစီတွင်တိုးမြှင့်ထားသောလက္ခဏာသုံးရပ်သည်ယူဆချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်“ ယာယီစဉ်ဆက်” တစ်ခုတည်းပေါ်တွင်သာတည်ရှိသည်။ အသုံးပြုမှုမှပစ္စည်းများကိုအလွဲသုံးစားမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အာရုံကြောအခြေခံနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလေ့အထကိုအတူတကွဖော်ပြထားသည်။ သင်ယူအပြုအမူပြန်လည်ပြင်ဆင်လိမ့်မည်
စွဲ၏ neurobiology အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများ dopamine (DA) ဂီယာစိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays သောအယူအဆကိုထောက်ခံ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတွင်အများဆုံးရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ထားသည့်ယန္တရားသည် ဦး နှောက်ဆုလာဘ် circuit တွင် DA-related link ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည် , , ] ဤအ neuroplastic အပြောင်းအလဲများ၏အဓိကနေရာများသည် mesolimbic နှင့် DA-ergic ဆားကစ်များဖြစ်သည်။ ဒါဟာ Nucleus Accumbens (NAc) မှာတိုးမြှင့် DA-ergic ဂီယာသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောသက်ရောက်မှုများကိုဖျန်ဖြေပေးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ , , , , ] NAc တွင်“ shell” နှင့်“ core” ဟုချေါသော function ၂ ခုပါ ၀ င်သည်။ Ventral Tegmental (ရိယာ (VTA) နှင့် NAc shell တို့တွင်အပြန်အလှန် DA-ergic ထိုးဖောက်မှုများရှိသည်။ ထိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ထူးခြားစွာပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အရေးကြီးသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ရပ်များနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအမြင်များအကြားသင်ယူသောအသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အဆိုပါ NAc DA-ergic လမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်အဲဒီ receptor- ပိတ်ဆို့ခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ Neurochemical ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လျော့နည်းစေသည် ချို့တဲ့ စားရန်, ဒါပေမယ့် like နှိပ်အတူတူပင်ဆုလာဘ်များအတွက် -related မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေကိုလျှော့ချကြသည်မဟုတ် [, , ] ။ ထို့အပြင် NAc အတွက် extracellular DA opiates  အားဖြင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေနေအပြုအမူအတွက် mesolimbic DA-ergic အတွက်မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်ကမူးယစ်ဆေး priming  အားဖြင့်ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသည်။ ထို့အပြင် NAc shell နှင့် VTA လျော့နည်းသွားမှုများသည် morphine priming အားဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားသော CPP (Conditioned Place Preference) အားပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။  က limbic system တစ်လျှောက်ရှိ VTA မှ DA projections များသည်သက်ဆိုင်သောသက်ဆိုင်သောဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ] ။ လှုံ့ဆျောမှုအခွအေနေမှအလိုက်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်အပျက်နှင့်အတူသင်ယူအသင်းအဖွဲ့များတည်ထောင်ရန်ဆယ်လူလာအပြောင်းအလဲများကို inducing, DA လွှတ်ပေးရေးအောက်မှာပေါ်ပေါက်  ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်တစ် ဦး ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်  တစ် ဦး စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်ရပ်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအားဖြင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာအဖြစ်, တစ် ဦး အထူးသဖြင့်အဖြစ်အပျက်အားဖြင့်သွေးဆောင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, အမူအကျင့်ရလဒ်များနေဆဲ "ရည်မှန်းချက် - ညွှန်ကြားထား" နှင့် "ကောင်းစွာလေ့လာသင်ယူ" နောက်ထပ် DA- သွေးဆောင် neuroplastic ပြောင်းလဲမှုများကိုမလိုအပ်အောင်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, NAc "core ကို" စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်သင်ယူအပြုအမူတွေကိုစကားရပ်ဖျန်ဖြေတဲ့အရေးပါသော site ကိုဖြစ်ဟန် [, , , ] ။ ထိုမှတပါး, သပ္ပါယ်အပြုအမူတွေရဲ့ဟူသောအသုံးအနှုနျးဖွယ်ရှိအကျိုးဖြစ်ရပ်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုစဉ်အတွင်း NAc core ကိုအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်အားဖြင့် modulated နေကြသည် [,  ။ ခြုံငုံ။ ပြောရလျှင် DA တွင်လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုရှိနိုင်ပြီးရံဖန်ရံခါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းမှအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့ကူးပြောင်းခြင်းတွင်အဓိကကျနိုင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအသစ်သောအဓိကလှုံ့ဆော်မှု၏ apparition ဖို့သက်ရှိနှင့် neuroplasticity သင်ယူခြင်းသွေးဆောင်ပြီးနောက်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာသက်ရှိကိုပုံမှန်သက်ဆိုင်သည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခု၏အံ့ app ဖွယ်အဖြစ်အပျက်ကိုသတိပေးရန်နှင့်ယခင်ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများ - အဖြစ်အပျက်ခန့်မှန်းချက်များမှတဆင့်လုပ်ခဲ့သည့်သင်ယူသောအသင်းအဖွဲ့များကို အခြေခံ၍ လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ NAc core အပါအဝင် ventral striatum (VS) စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာသင်ယူမှုနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောအပြိုင် cortico-striato-pallido-cortical ကွင်းဆက်တန်းများကိုသတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည်။ နှင့် NAc shell ကိုအပါအဝင် dorsal striatum (DS), သိမြင်မှုနှင့်မော်တာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ဆက်စပ်သော [, ] ။
စုဆောင်းထားသောအထောက်အထားများအရ basolateral amygdala (BLA) နှင့် NAc core များသည်ခွဲခြားထားသည့်အာရုံကြောဓာတုယန္တရားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုအပြုအမူကိုအခြေ ပြု၍ အားဖြည့်သူများကထိန်းသိမ်းထားသည်။ , , , ] ။ BLA ရှုပ်ထွေးသောသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်သည့်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းတွင်အခြေခံအခန်းကဏ္ roles မှပါဝင်သည် ,  ထို့အပြင်၎င်းသည်အစာစားခြင်း (အပြုသဘောဆောင်သော) အေးစက်စေသောအခြေအနေတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ကွဲပြားအာရုံခံဆဲလ်များသည်အပြုသဘောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာနှစ်ခုလုံးကိုတုန့်ပြန်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာနျူကလိယများသို့အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းမပြုပါ။ လေ့လာမှုများက DA receptor antagonists များ၏ BLA ၏ထိုးသွင်းမှုသည်မျိုးသုဉ်းပြီးနောက်ရလဒ်များအား“ CS- သွေးဆောင်ခြင်းပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း” ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေ / အပြုအမူများတွင် BLA တွင် DA-ergic ဂီယာ၏အဓိကအခန်းကဏ္meanကိုဆိုလိုနိုင်သည်။ ဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီ၊ အေးဆေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏တုန့်ပြန်မှုအပေါ် မူတည်၍ တင်ဆက်မှုအနေဖြင့် NAc အမာခံမှ DA efflux ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်တိုးမြှင့်ခြင်းမရှိပါ။ glutamate (GLU) efflux သည် NAc ၏ဗဟိုတွင် တက်ကြွသောကင်း - ရှာဖွေနေစဉ်အတွင်းတိရိစ္ဆာန်များ  နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော“ cues + မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု” ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းအခြေအနေများက medial prefrontal Cortex (mpFC) နှင့် NAc တွင် DA နှင့် GLU များတိုးပွားလာမှုနှင့် NAc ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုမြှင့်တင်ရာ၌အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်ကြောင်း၊ "မျိုးစုံ relapse အစပျိုး"  က primed အပြုအမူရှာဖွေနေ။ အတူတကွယူထားသောဤတွေ့ရှိချက်များအရမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း / ရယူခြင်းအပြုအမူအားအသုံးပြုခြင်းမှအလွဲသုံးစားမှုသို့ကူးပြောင်းခြင်းသည်“ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောအားဖြည့်ဆေးများ” ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် BLA နှင့် GLU-ergic ရှိ DA-ergic ဂီယာအပေါ်မူတည်နိုင်သည်။ အဆိုပါ NAc core ကိုနှင့်အတူတကွ mpFC အတွက်ဂီယာ။
ဤသည် BLA နှင့် NAc core ကို၌ဤရွေးချယ်အာရုံကြောဓာတုထုတ်လွှင့် "limbic cortical-ventral striato-pallidal" circuitry အတွင်း ဦး နှောက် subsystem ၏အစိတ်အပိုင်းများရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုပေါ်ပေါက် (57] ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ “ disconnection” ဟုခေါ်သည့်နည်းပညာသည် DS နှင့် VS တို့၏လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများ (ဥပမာ - ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် - အပြုအမူအပေါ် PIT ကဲ့သို့) သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ VS သည် BLA နှင့် orbitofrontal cortex (oFC) ကဲ့သို့သောအဆောက်အ ဦ များအကြားအဓိကဆက်သွယ်မှုကြောင့်ဆက်သွယ်မှုစိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုဆက်ထိန်းထားရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ [, , ] ။ NAc core သည် Pavlovian အေးစက်မှုတွင်လည်းကောင်း၊ အတင်းအဓမ္မအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်သော“ Pavlovian-instrumental” သင်ယူမှုယန္တရားများတွင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်အတွက်အရေးကြီးသည် , , ] အပြန်အလှန်အားဖြင့် DS သည်သိမှုနှင့်မော်တာလုပ်ဆောင်မှုများတွင်အခန်းကဏ္ has ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ပြီးနှစ်ခုလုံးအတွက် neurobiological base ကိုပေးသည် ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြား နှင့် လေ့ထိန်းချုပ်မှု "ဆာပသင်ယူမှု" [, , , ] ၏။ Pavlovian-instrumental သင်ကြားမှုအဆင့်ဆင့်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအပြုအမူများပါ ၀ င်သည့်ရံဖန်ရံခါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအလွဲသုံးစားမှုသို့ကူးပြောင်းရာတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။
မကြာသေးမီကစမ်းသပ်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရဘုံအာရုံကြောအတွင်းသို့ထူးခြားသောအရာတစ်ခုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသည့်ဘုံအာရုံကြောလမ်းကြောင်းများကိုတိုးချဲ့ amygdala ဟုခေါ်သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏တွန်းအား၊ စိတ်ခံစားမှုနှင့်အလေ့အကျင့်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဤတိုက်နယ်ကိုလွှဲအပ်နိုင်သည်။ , , , ] တိုးချဲ့ amygdala ထိုကဲ့သို့သော stria terminalis (BNST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယ, အလယ်အလတ် medial amygdala (CeA) နှင့် NAc shell ကိုအဖြစ်အများအပြား Basal forebrain အဆောက်အ ဦ များဖွဲ့စည်းထားပါသည်  ။ ဤရွေ့ကားအဆောက်အ ဦ များ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်, immunohistochemistry နှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်တူညီရှိသည် [, ], သူတို့သည်ထိုကဲ့သို့သော hippocampus (HP) နှင့် BLA အဖြစ် limbic အဆောက်အ ဦ များမှ afferent ဆက်သွယ်မှုကိုလက်ခံရရှိ။ တိုးချဲ့ amygdala အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ "အပြုသဘောဆောင်အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ" နှင့်ဆက်စပ် neurotransmission စနစ်များနှင့် ဦး နှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်အခြားအဓိကအဆောက်အ ဦ များပါဝင်သည်သောအဓိကအစိတ်အပိုင်းများ , , ]] ။ ထို့ကြောင့်ထပ်မံလေ့လာမှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသို့အသုံးပြုခြင်းမှကူးပြောင်းခြင်းတွင်တိုးချဲ့ထားသော amygdala ၏အခန်းကဏ္investigကိုစုံစမ်းနိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များအတွင်းစားသောက်နည်းသည်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်ကစတင်ခဲ့သောသမိုင်းအပြောင်းအလဲများတွင်အနောက်နိုင်ငံများသည်စားနပ်ရိက္ခာယဉ်ကျေးမှုတွင်အပြောင်းအလဲများကိုကူညီခြင်းဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှားပါး။ အဖိုးတန်သည်ဟုမှတ်ယူထားသောထိုအစားအစာများကိုမကြာခဏနှင့် ပို၍ အကြီးအကျယ်လောင်ရန်လိုကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လိုအပ်သောအစားအစာများထက်ပိုမိုသောအစာကိုစားလေ့ရှိပြီးအစားအသောက်၏အစိတ်အပိုင်းများအကြားသိသိသာသာမညီမျှမှုများနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်အစားအသောက်မူမမှန်မှုများ (ED) ကိုပိုမိုဖြစ်ပွားစေခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကတူညီသော ဦး နှောက်စနစ်များနှင့် neurotransmission ဆားကစ်အတော်များများသည်အစားအစာများနှင့်ဆေးဝါးများနှင့်သက်ဆိုင်သောအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုများတွင်ပါ ၀ င်သည်ဟူသောယူဆချက်ကိုအကြံပြုထားသည်။ အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး [, , ] တူညီသောအာရုံကြောစနစ်များမှအကူးအပြောင်း - အစာစားခြင်းရောဂါများကိုစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်ဟူသောယူဆချက်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုမတိုင်မီလက်တွေ့သုတေသနတွင်အသုံးပြုသောစံနမူနာများနှင့်အတူအစာစားခြင်းကဲ့သို့သောအစားအစာမမှန်ခြင်း၏အဓိကလက္ခဏာများကိုလေ့လာရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြသည့်လေ့လာမှုများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
စွဲလမ်းမှု၏ psychobiology ၏လယ်ပြင်တွင်, pharmacological နှင့်သဘာဝတ္ထုများအနေဖြင့်မှီခိုနှင့်ပတ်သက်။ လေ့လာမှုအရေအတွက်သိသိသာသာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကစွဲလမ်းမှုအပေါ်အမူအကျင့် / ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာသုတေသနသည်ချောကလက်၊ လိင်နှင့်လောင်းကစားကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုစွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ချေကိုအာရုံစိုက်စေခဲ့သည်။ , , ,  အခြားတစ်ဖက်တွင်အချို့သောလေ့လာမှုများကအရာ ၀ တ္ထုအမျိုးမျိုးတွင်စွဲလမ်းနိုင်သောအလားအလာများနှင့်ထိုစွဲလမ်းစေသောအစားအစာများ၏သီးခြားလက္ခဏာများကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အချို့သောအရေးကြီးသောပြissuesနာများကိုထောက်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်အချို့အခြေအနေများတွင်ဤအားဖြည့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းသည်အပြုအမူဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ (ဦး နှောက်ဆုလာဘ်စနစ်၏အာရုံခံမှု၊ တိုးမြှင့်သောမော်တာတုံ့ပြန်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု) နှင့်အာရုံကြောဓာတုပြောင်းလဲမှုများ (mesolimbic DA-ergic system) ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု , , ] အသုံးပြုမှုမှအရာ ၀ တ္ထုအမျိုးမျိုးအားအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုလေ့လာရန်စမ်းသပ်မော်ဒယ်များကိုဖန်တီးထားသည်။ , , , , , ] အထူးသဖြင့်သကြားဓာတ်ပေါများစွာစားသုံးမှုသည်အခြားအချက်များနှင့်အတူအဝလွန်ခြင်းဖြစ်ပွားမှုကိုတိုးပွားစေသည်။
မစားမသောက်ဘဲစားသောက်ခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ လူသားများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များမှလေ့လာချက်များအရစွမ်းအင်မျှမျှတတရှိခြင်းအပြင်အစာစားခြင်းအပြုအမူသည်ဇီဝဖြစ်စဉ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်မသက်ဆိုင်သောအချက်များဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လက်တွေ့လေ့လာမှုများမှအချက်အလက်များအရအချို့သောသူများသည်ပျော်စရာအစားအစာများစားသောအခါစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ] အာဟာရရှိသောအစားအစာများကိုအလွန်အကံျွစားသုံးခြင်းသည် ဦး နှောက်၏အကျိုးကျေးဇူးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကွန်ယက်များတွင်ရေရှည် neuroadaptations များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုအဆိုပြုထားသည် ၊ ရေရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောထုတ်လုပ်မှုများနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ အတူတူအတူတကွယူ, ဤသက်သေသာဓကအစာစားခြင်းနှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုမူးယစ်ဆေးစွဲအပေါ်စမ်းသပ်သုတေသနစမ်းသပ်မောင်းနှင်, အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုမှုကနေ "ကူးပြောင်းရေး" ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှာဖွေစူးစမ်းတူညီသောအဓိကသီအိုရီသုံးခုကိုအသုံးပြု။ ရှင်းပြနိုင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည် သူတို့ရဲ့အလွဲသုံးစားမှုမှသာယာသောအစားအစာ။
မကြာသေးမီကကြွက်များနှင့်မျောက်များထံမှသက်သေအထောက်အထားများအနေဖြင့်အစာစားခြင်းမမှန်သည့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် , , , , , ] ဒါဟာကယ်လိုရီအခမဲ့ saccharin ဖြေရှင်းချက်ကိုယူဆနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုသွေးကြောသွင်းသွင်းကိုကင်းကိုထိုးသွင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကြွက်များသည်ဒုတိယနည်းလမ်းထက်ယခင်ဖြေရှင်းချက်ကိုရွေးချယ်သည်။  ဤသည်ပျော်မွေ့သောအစားအစာတွင်ရှိသောအာဟာရဓာတ်သည် ဦး နှောက်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုမည်သို့ကယ်လိုရီဝန်နှင့်မတူစေဘဲမည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအစားအစာများသည်ဆုချီးမြှင့်ခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အာရုံကြောပေးပို့မှုစနစ်များကိုအသက်ဝင်စေနိုင်သည်။ မြင့်မားသောအာဟာရရှိသောအစားအစာများသည်ချောကလက် ဦး စားပေးမဟုတ်သောလူနှင့်မဆိုင်သောမျောက်များတွင်ကြာရှည်တည်မြဲသောအမှတ်ရစရာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရုတ်တရက်အစားအစာ - ဆုရရှိခြင်းမရှိခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့သောအပြုအမူများ (ဥပမာ - စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း) ကိုစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း cortisol အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်စေသည်။ [စာမျက်နှာ ၈၇ ပါရုပ်ပုံ] ဤတွေ့ရှိချက်များအပေါ်မှီခိုခြင်း၊ အစားအစာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအစာစားခြင်းအပြုအမူများသည်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အစာစားခြင်းရောဂါများပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်းတွင်အရေးကြီးသည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏အဓိကလက္ခဏာများ၊ အတင်းအကျပ်ရှာဖွေခြင်း - အမူအကျင့်နှင့်ပြန်လည်ကျင့်သုံးခြင်းကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု၍ ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ယခင်ကမူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏အဓိကလက္ခဏာများကိုသတ်မှတ်ထားသောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု၍ အစားအစာစွဲခြင်းကိုလေ့လာရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များအပြင်စွဲခြင်း၏နဗ်ကြောဆိုင်ရာဗေဒအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုအမျိုးမျိုးသည်အစားအစာများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်တူညီသည်ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံသည် , , , , [71 ]] ။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်အာဟာရရှိသောအစားအစာများ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သောစွမ်းရည်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြောင်းလဲမှုများနှင့်အမူအကျင့် / အာရုံကြောဓာတုပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဦး နှောက်ဆုချခြင်းဆားကစ်တွင် DA ပါဝင်သည့် link ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခြင်းသည်အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူတွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်မှတ်မိလွယ်ကူစေသည်။ , ,  အထူးသဖြင့် DA ဖြန့်ချိမှုသည်လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အစားအစာအသုံးပြုမှုမှပုဂ္ဂလဒိreward္ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်နေပုံရသည်  ] စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့မှုကြောင့်သွေးဆောင်ထပ်ခါတလဲလဲ mesolimbic DA ဆွ ဦး နှောက်ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အလားတူစွာထပ်ခါတလဲလဲအာဟာရရှိသောအစားအစာများကိုထုတ်ဖော်ခြင်းသည်တူညီသော neurotransmission system များကို အသုံးပြု၍ အတင်းအကျပ်အစားအစာစားသုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုမှတပါး, neuroimaging လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးစွဲဘာသာရပ်များမှာတွေ့သောသူတို့အားဆင်တူဖြစ်ကြောင်းအဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် DA အဲဒီ receptor စကားရပ်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြ [, , , ]
အစာစားခြင်းမမှန်ခြင်းများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အခြေအနေများရှိသော်ငြားတောင်မလှုပ်ရှားနိုင်သည့်အပြုအမူဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ဒါဟာရှုပ်ထွေးသောဗီဇ - ပတ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန် compulsive စားအပြုအမူ၏အဓိကအချက်ဖြစ်မည်အကြောင်းတွေးဆခဲ့သည် [91, ] အများအပြားကလေ့လာမှုများ၎င်း၏မူးယစ်ဆေးစွဲ [2, ] တွင်ဖြစ်ပျက်အဖြစ် compulsive ကဲ့သို့အပြုအမူတွေဖို့အကွံအတွက် DA type18 receptors (D93Rs) ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပါပြီ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကြွက်မမော်ဒယ်လ်တစ်ခုတွင်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုသရုပ်ပြပြီးဖြစ်သည်။ C57 နှင့် DBA ကြွက်များကို C88 နှင့် DBA ကြွက်များကိုအသုံးပြုပြီးအပြုအမူအားဖိနှိပ်သည့်ပုံစံတွင်ပြသခဲ့သည် , ] ဤလေ့လာမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိစီးထားသော C57 နှင့် DBA ကြွက်များကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန်ချောကလက် - ရှာဖွေသည့်အပြုအမူအားအေးအေးဆေးဆေးဖိနှိပ်ခြင်း၏စံနမူနာကို အသုံးပြု၍ မစားမသောက်စားအပြုအမူကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကြောင့် accumbal D2Rs နည်းပါးလာရရှိမှုအစားအစာ compulsive - ရှာဖွေနေအပြုအမူ၏ဖြစ်ပွားမှုအတွက်မျိုးရိုးဗီဇအန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ယူဆနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သည် striatum အတွက် D2Rs ၏အသုံးအနှုန်းပြောင်းလဲနေတဲ့ compulsive စားအပြုအမူသွေးဆောင်နိုင်သည်ကိုတွေးဆခဲ့သည် ဤရည်မှန်းချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနောက်တိုင်းချေပခြင်းဖြင့် mpFC ရှိ D1Rs နှင့် D2Rs ဖော်ပြမှုကို striatum နှင့် D1Rs, D2Rs နှင့် NE-ergic α1 receptors (α1Rs) အဆင့်များဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပြသခဲ့သည်အစားအစာအပြုအမူသွေးဆောင်အချို့သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ (အစားအစာကန့်သတ်) ထိတွေ့မှု, NAc D88Rs ၏ရရှိမှုလျော့နည်းလာနှင့်ဆက်စပ်သောမျိုးရိုးဗီဇနောက်ခံပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ပြောင်းပြန် striatum D2Rs တက် - စည်းမျဉ်းနှင့် mpFC α2Rsချ - စည်းမျဉ်း compulsive စားအပြုအမူစဉ်အတွင်းသွေးဆောင်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်လည်း compulsive စားအပြုအမူအတွက်မျိုးဗီဇ - ပတ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန်၏သော့ချက်အခန်းကဏ္ confirm ကိုလည်း NAc D1Rs ၏အနိမ့်ရရှိမှု compulsive စားအပြုအမူများအတွက် "ဖွဲ့စည်းပုံ" မျိုးရိုးဗီဇအန္တရာယ်အချက်တစ်ချက်သောစိတ်ကူးထောက်ခံပါတယ်အတည်ပြု။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် striatum D2R နှင့် mpFC α2Rတန်ပြန်စည်းမျဉ်းများသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုအပေါ်ယူဆထားသည့်အတိုင်းလှုံ့ဆော်မှုရှိသောစားသုံးခြင်းအပြုအမူများနှင့်အကျိုးဆက်အနေဖြင့်စားနပ်ရိက္ခာစွဲလမ်းမှုနှင့်အပြိုင်ပြောင်းလဲခြင်းအလားအလာရှိသော“ neuroadaptive တုန့်ပြန်ချက်များ” ဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆကြသည်။ ]] ။
neurobiological လေ့လာမှုများနှင့်အတူ, electrophysiological လေ့လာမှုများတစ်လှုံ့ဆျောအပြုအမူစဉ်အတွင်း striatal အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများအတွက်အလွန်အမင်းခြားနားချက်အလင်းပါပြီ [, , ] ထို့အပွငျက sucrose - ရှာသောအပြုအမူစဉ်အတွင်း phasic DA တုံ့ပြန်မှုကိုရွေးချယ် accumbal အာရုံခံ၏ excitatory ပေမယ့်မ inhibitory တုံ့ပြန်မှု modulate ကြောင်းပြသ  ။ ထို့ကြောင့် DA လျင်မြန်စွာအချက်ပြမှုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သောလုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်သြဇာသက်ရောက်စေသောကွဲပြားသောတိကျသော microcircuits များကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်တစ်ခုတည်းအာရုံခံဆဲလ်လှုပ်ရှားမှု၏အသံသွင်းထားတဲ့အတွက် mesolimbic စနစ် (NAc နှင့် VTA) မှမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည် Vivo အတွက် ကြွက်ရေနှင့် / သို့မဟုတ်အရသာဖြေရှင်းချက်  ကိုလျက်ဖို့လေ့ကျင့်ခဲ့ကြရသောစမ်းသပ်မှု။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအစားအစာနှင့်အရည်များစားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်တိရိစ္ဆာန်များအားလှုံ့ဆော်ရန် VTA ၏အဓိကအခန်းကဏ္ suggested မှတွေ့ရှိရသည်။ ဤအချက်သည် VTA သည် NAc shell  မှတစ်ဆင့် hedonic တန်ဖိုးနှင့်ပတ်သက်သော AMY သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်စပ်နေပုံရသည်။ ထို့အပြင်အရသာကိုလည်း sapid ဓာတုပစ္စည်းများ၏သာယာမှုကို အခြေခံ၍ AMY က encod လုပ်ပေးသည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ , 
စိတ် ၀ င်စားစရာမှာ၊ NAc တွင်အာရုံခံဆဲလ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးတည်ရှိမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ , ] အစာရှောင်ခြင်း spike interneurons (FSIs) နှင့်အလယ်အလတ် spiny neurons (MSNs) ။ FSI များသည် MSN များအားပြင်းထန်စွာတားဆီးပေးသည်၊ ၄ င်းတို့သည်“ တိုးမြှင့်အချိန်” ၊ ] နှင့် MSN များမှကွဲပြားမှုများကိုဆုများရရှိရန်တုန့်ပြန်သည် ,  ။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရ FSI နှင့် MSN များသည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်သင်ယူခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောထိုအပြုအမူများတွင်ကွဲပြားသောအခန်းကဏ္ have မှရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် NAc သည်လိုအပ်သောအပြုအမူနှင့်အပြုအမူအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ in မှပါ ၀ င်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် NAc နှင့် VS ရှိအာရုံခံဆဲလ်များ၏လူ ဦး ရေသည်အစာစားခြင်းနှင့်စားသုံးခြင်းအဆင့်တိုင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအလွယ်တကူတုန့်ပြန်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် , , , ] အစားအစာအပြုအမူများ၌ NAc အာရုံခံဆဲလ်များကိုစိတ်ထက်သန်စွာတားဆီးထားခြင်းကြောင့် NAc တားစီးမှုသည်အစားအစာရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် NAc ၏ယေဘူယျအားဖြင့်လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲအစားအစာရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုတားဆီးသောထိုကဲ့သို့သောအာရုံခံဆဲလ်များ၏တိတ်ဆိတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပတ် ၀ န်းကျင်အစားအစာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များကိုအော်ပရေတာတုံ့ပြန်စဉ်လှုံ့ဆော်သည့်အစာစားခြင်းအပြုအမူကိုမောင်းနှင်သည့်တူညီသောတားဆီးထားသောအာရုံခံဆဲလ်များစွာမှာအပြန်အလှန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်။ ပုံမှန်မှမဖြစ်မနေအစာစားခြင်းအပြုအမူသို့ဖြစ်နိုင်ချေကူးပြောင်းမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက်ဆုလာဘ်စနစ်၏ mesolimbic တည်ဆောက်ပုံများနှင့်ခွဲခြား။ မရသောအခန်းကဏ္discrimကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် electrophysiologically ဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်ငြင်းခုံဖွယ်ဖြစ်သည်။
စိတ် ၀ င်စားဖွယ်မေးခွန်းအနည်းငယ်သည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏သီအိုရီ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဇီဝကမ္မသဘောတရားအရ၊ စွဲလမ်းမှုသုတေသနကိုမောင်းနှင်သည့်အဓိကသီအိုရီသုံးခုနှင့်ဆက်စပ်သည့် မှစ၍ သီအိုရီနှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်များအထိဤနေရာတွင်တင်ပြသောဆုံချက်အထောက်အထားများကိုပေါ်ပေါက်စေသည်။ / မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အစားအသောက်တို့အကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝဇီဝကမ္မဇီဝကမ္မဖြစ်တည်မှုနှင့်အလေ့အထကိုအလွဲသုံးစားပြုမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ပထမမေးခွန်းမှာသီအိုရီဆိုင်ရာအယူအဆသုံးခုဖြစ်သည့်“ မက်လုံး - အဓိကကျသည့်သီအိုရီ”၊ “ hedonic dysregulation သီအိုရီ” နှင့်“ အလေ့အထအခြေခံသောသင်ယူမှုသီအိုရီ” သည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုတစ် ဦး ချင်းရှင်းပြနိုင်ခြင်းရှိမရှိဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဤသီအိုရီ (၃) ခုသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရှင်းပြနိုင်သောထူးခြားသောအထွေထွေအယူအဆ၏အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့် / ယူဆောင်လာသည့်အပြုအမူတွင်ထူးခြားသော“ ယာယီဆက်တိုက်” တစ်လျှောက်တွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအင်္ဂါရပ်များဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောယူဆချက်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်သင့်သည်။
ရံဖန်ရံခါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအလွဲသုံးစားမှုသို့ကူးပြောင်းခြင်းသည်အပြုသဘောအားဖြည့်ခြင်းမှအနှုတ်သဘောသို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြေခံပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးဆုကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် - တစ်ခုမှာစားချင်စိတ်တစ်ခု (အစားအစာဆီသို့ ဦး တည်ခြင်း) နှင့်အခြားတစ်ခုမှာ“ လိုသော” နှင့်“ အကြိုက်” ဟူ၍လည်း ရည်ညွှန်းသည့်အခြားစစ်ဆေးမှု (hedonic assessment) ။ ဒါဟာ "လို" နှင့် "အကြိုက်" သူတို့အကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neuroanatomical ခွဲခြာသတ်မှတ်, လွတ်လပ်စွာပြုမူနိုင်ကြောင်းရှင်းပြထားသည် [, ] ထို့အပြင်၎င်းသည်တွန်းအား (ပြင်းထန်သောလိုအပ်ချက်) နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် neuroplastic အပြောင်းအလဲများအသုံးပြုမှုမှအလွဲသုံးစားမှုမှကျမ်းပိုဒ်  တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းသတ်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလွဲသုံးစားမှုအလေ့အထကိုအခြေခံသည့်လေ့လာသင်ယူမှုသာလျှင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုစောဒကတက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤယူဆချက် (၃) ခုသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏ရှုပ်ထွေးသောလက္ခဏာများဖြစ်သောရှုပ်ထွေးသောရှာဖွေခြင်းအပြုအမူနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းများကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်ထူးခြားသော“ ယာယီကာလဆက်မပြတ်” ကိုစဉ်းစားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ (၁) ပုံမှန်အားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစဉ်အတွင်းအဆင့်ဆင့်ပုံမှန်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရသင်ကြားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ၎င်းတွင် hedonic dysregulation ကိုတက်ကြွစေပြီး ((၂) မှတိုးပွားလာသော“ ထူးခြားချက် - မက်လုံးပေးခြင်း” ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်) မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းအပြုအမူ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လှုံ့ဆော်မှု၊ hedonic dysregulation နှင့်အလေ့အထကိုအခြေခံသည့်သင်ကြားမှုကိုမူထူးခြား။ ရှုပ်ထွေးသောမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူ၏အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည် neuroanatomical နှင့် neurobiological သက်သေအထောက်အထားကဒီယူဆချက်နှင့်အညီဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်လေ့လာမှုများစွာကဤလက္ခဏာသုံးမျိုးသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းတွင်မည်သို့ပါဝင်ပတ်သက်သည်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သော်လည်း“ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောယာယီစဉ်ဆက်” တစ်ခုတွင် ၄ င်းတို့၏ဖြစ်နိုင်ချေဆက်စပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သာသိရှိရသည်။ လူ့နှင့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများစွာကဆုလာဘ်သည်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ has မှဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည် ,  ထို့အပြင်အချိန်ပြတင်းပေါက်များနှင့် "ဆုနှုန်းထားများ" အေးစက်များအတွက်အလွန်အရေးပါသည်, DA အာရုံခံဆဲလ်ဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်။ ယာယီသတင်းအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အရေးပါပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ meso-cortico-limbic system တွင် DA-ergic neuron များသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုဆုလာဘ်ကိုဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ချက်ချင်းမြင်တွေ့နိုင်မှုတို့ဖြင့်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သောဆုလာဘ်အချိန်ကိုက်ပြသည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတစ်ခုတည်းသော“ ယာယီကာလဆက်မပြတ်” ၏ယူဆချက်များကိုပိုလီယို - cortico-limbic DA-ergic circuit မှကမကထပြုသည့်ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုခြင်းမှပစ္စည်းများကိုအတင်းအကျပ်အသုံးပြုခြင်းအထိပိုမိုအားကောင်းစေသည်။ လက်တွေ့အဆင့်တွင်၎င်းသည်“ ယာယီကာလဆက်မပြတ်” တစ်လျှောက်တစ်ခါတစ်ရံအသုံးပြုခြင်းမှဆေးဝါးပစ္စည်းများအလွဲသုံးစားမှုအထိမည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မည်၊ နှင့်ရောဂါဗေဒမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှု၏သောင်းကျန်းမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ကုထုံးနည်းဗျူဟာအသစ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အပြုအမူကိုယူပြီး။ ထို့အပြင်၎င်းအား“ တိုးချဲ့ amygdala ဆားကစ်” ဟုခေါ်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှု၏စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ။ တိုးချဲ့ amygdala တွင်ပါဝင်သော ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်, immunohistochemistry နှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်တူညီရှိသည်။
တိုးပွားလာသောအချက်အလက်များ၏အချက်အလက်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုအကြားအမူအကျင့်၊ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းသည် mpFC Norepinephrine (NE) ဂီယာသည်ချောကလက်ရှာဖွေခြင်း / အပြုအမူပြုခြင်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်ဟုယူဆသည်။ mpFC NE သည်အလှည့်အပြောင်းရှာဖွေခြင်း၊ စားခြင်းအမူအကျင့်တွင် mesolimbic DA-ergic ဂီယာမှထိန်းချုပ်သည်။  ထို့အပြင်၊ mpFC NE သည်α71 receptors များမှတဆင့် GABA-ergic neurotransmission ကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။ , NE သည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အမူအကျင့်များတွင်ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်စဉ်တွင် NE ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္suggestကိုဖော်ပြသည်။ , ] ။ ထို့ကြောင့် intereuronal amygdaloid လှုပ်ရှားမှုကိုဖျန်ဖြေရာတွင် NE ၏အခန်းကဏ္ about နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုနှစ်မျိုးလုံး၏ကူးပြောင်းမှုတွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော meso-cortico-limbic လမ်းကြောင်းကိုပိုမိုနားလည်ရန်အလို့ငှာပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုထားပါသည်။  113]] ။
ဒုတိယမေးခွန်းမှာအထက်ပါတင်ပြချက်များ (aberrant motivation, hedonic dysregulation and aberrant learning) နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲစွဲသူများ၏အပြုအမူသည်အစားအသောက်မူမမှန်မှုကိုဖော်ပြသည့်စိတ်ပညာဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုရှင်းပြနိုင်ခြင်းရှိမရှိဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အစားအစာသုံးစွဲမှုအကြားအမူအကျင့် / အာရုံကြောဆိုင်ရာဗေဒဆိုင်ရာထပ်တူမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုများစွာရှိသော်လည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကူးအပြောင်းကိုဖော်ပြသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်“ aberrant motivation”၊ ပုံမှန်ကနေ compulsive စားအပြုအမူမှအစားအစာစွဲ။ ဤသီအိုရီ (၃) ခုသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၏လက္ခဏာများနှင့်ဆင်တူသောမစားမသောက်သုံးခြင်းနှင့်ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကဲ့သို့သောအစားအစာမမှန်ခြင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုမိုနားလည်ရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အနာဂတ်အလုပ်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းစသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။
EP စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။ AG, CT နှင့် HN တို့သည်စာရွက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
EP ကိုမြောက်အမေရိကနှင့်ဥရောပသုတေသီများ (တိုတောင်းသောကာလ) အတွက်ပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသားများ JSPS (ဂျပန်သိပ္ပံမြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်း) မှထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
American Psychiatric Association ။ စိတ်ရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်။ ၅ ကြိမ်မြောက်။ ; ၂၀၁၃ (ဝါရှင်တန်ဒီစီ)
Berridge, KC အပြုအမူ neuroscience အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးသဘောတရားများ။ Physiol Behav ။ 2004; 81: 179-209
Koob, GF နှင့် Volkow, ND စွဲ၏ Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ 2010: 35-217DOI: http://dx.doi.org/10.1038/npp.2009.110
Robbins, TW နှင့် Everitt, BJ နိဒါန်း: မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ neurobiology: အသစ် vistas ။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol သိပ္ပံ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ 2008: 363-3109DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2008.0108
Berridge, KC နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, TE ဆုချီးမြှင့်မှုအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္:မှာဘာလဲ။ Brain Res Brain Res Rev. 1998; 28: 309-369
Kirkpatrick, MG, Goldenson, ni, Kapadia, N. , Khaler, CW, de Wit, H. , Swift, RM ။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစရိုက်များကစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၌အမ်ဖီတမင်းဖြင့်ပြုလုပ်သောအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ကွဲပြားမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ စိတ်ပညာ။ ၂၀၁၅; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00213-015-4091-y
Wardle, MC နှင့် de Wit, အိပ်ချ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှဓာတ်ပြုမှုအပေါ် amphetamine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ စိတ်ပညာ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ 2012: 220-143DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00213-011-2498-7
Thomsen, KR တိုင်းတာခြင်း anhedonia: ကြိုးစားခြင်း, အတွေ့အကြုံနှင့်ဆုလာဘ်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်စွမ်းရည်ချို့တဲ့။ ရှေ့စိတ်ပညာ။ ၂၀၁၅; ၆: ၁၄၀၉DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01409
Koob, gf အီသနောအဘို့တပ်မက်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ။ စွဲ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ 2000: S95-S73
Parylak, SL, Koob, GF နှင့် Zorrilla, EP အစားအစာစွဲ၏မှောင်မိုက်ဘက်။ Physiol Behav ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ 2011: 104-149DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2011.04.063
Koob, gf စွဲထဲမှာ ဦး နှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတွက်အခန်းကဏ္။ ။ Neuron ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ၅၉: ၁၁–၃၄ ဒို http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2008.06.012
Gardner, EL စွဲနှင့် ဦး နှောက်ဆုလာဘ်နှင့် antireward လမ်းကြောင်း။ Adv Psychosom Med ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ၃၀: ၂၂-၆၀ ဒို http://dx.doi.org/10.1159/000324065
Everitt, BJ နှင့် Robbins, TW မူးယစ်ဆေးစွဲမှုအတွက်အားဖြည့်ပေးသည့်အာရုံကြောစနစ်များ - လုပ်ရပ်များမှအလေ့အထများ၊ နတ်နေရာသစ်။ ၂၀၀၅; 2005: 11-1481
Alderson, HL, Robbins, TW နှင့် Everitt, BJ ကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူရှာဖွေသည့်အပြုအမူများရယူခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း - ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံအားဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဘိန်းဖြူကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှု။ စိတ်ပညာ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ 2000: 153-120
Arroyo, အမ်, Markou, အေ, Robbins, TW နှင့် Everitt, BJ ကြွက်များတွင်အားဖြည့်ခြင်းဒုတိယအကြိမ်အစီအစဉ်အရသွေးကြောသွင်းအားဖြည့်သွင်းခြင်း၊ စိတ်ပညာ။ ၁၉၉၈; 1998: 140-331
Everitt, BJ, Dickinson, အေနှင့် Robbins, TW စွဲလမ်းအပြုအမူ၏ neuropsychological အခြေခံ။ ဦး နှောက် Res ဗျာ 2001; 36: 129-138
Gasbarri, A. , Pompili, A. , Packard, MG နှင့် Tomaz, C. နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်အလေ့အကျင့်သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ် - အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလက္ခဏာများ။ Neurobiol Mem Mem ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 2014: 114-198DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nlm.2014.06.010
Everitt, BJ, ဘီးလင်း, ဃ, Economidou, ဃ, Pelloux, Y. , Dalley, ဂျေနှင့် Robbins, TW မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသည့်အလေ့အထနှင့်စွဲလမ်းမှုအားနည်းလာစေရန်အားနည်းချက်ကိုအခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများ။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol သိပ္ပံ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ 2008: 363-3125DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2008.0089
Dalley, JW, Everitt, BJ နှင့် Robbins, TW Impulse, compulsivity နှင့်အထက်မှအောက်သို့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှု။ Neuron ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ 2011: 69-680DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2011.01.020
Dickinson, အေ, စမစ်, အက်စ်နှင့် Mirenowicz, ဂျေ Pavlovian ၏ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့် dopamine ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသူများအောက်တွင်ဆာပသောမက်လုံးများသင်ကြားခြင်း။ Behav Neurosci ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ 2000: 114-468
Cardinal, RN, ပါကင်ဆန်, ဂျေအေ, ခန်းမ, ဂျေနှင့် Everitt, BJ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု: အ amygdala, ventral striatum နှင့် prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္။ ။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2002; 26: 321-352
Bermudez, MA နှင့် Schultz, ဒဗလျူ ဆုလာဘ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အချိန်ကိုက်။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol သိပ္ပံ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 2014: 369DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2012.0468
Bermudez, MA, Göbel, C နှင့် Schultz, W. amygdala အာရုံခံအတွက်ယာယီဖွဲ့စည်းပုံမှ sensitivity ကို။ Curr Biol ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ 2012: 9-1839DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2012.07.062
Volkow, ND နှင့်ပညာရှိ, RA မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းသည်အဝလွန်ခြင်းကိုမည်သို့နားလည်စေနိုင်သနည်း။ နတ်နေရာသစ်။ ၂၀၀၅; 2005: 8-555
Volkow, ND, Wang, GJ နှင့် Baler, RD ဆုလာဘ်၊ dopamine နှင့်အစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း - အဝလွန်ခြင်းအတွက်သက်ရောက်မှုများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ၁၅း၃၇–၄၆ ဒို http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2010.11.001
Volkow, ND, Wang, GJ, Fowler, JS နှင့် Telang, F. စွဲခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းတွင်အာရုံခံဆဲလ်များထပ်နေခြင်း - စနစ်ရောဂါဗေဒ၏အထောက်အထား။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol သိပ္ပံ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ 2008: 363-3191DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2008.0107
di Chiara, G. အနှင့် Imperato, အေ လူသားများအလွဲသုံးစားပြုသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် mesolimbic system တွင် synaptic dopamine ပါဝင်မှုကိုတိုးစေပြီးကြွက်များအားလွတ်လပ်စွာရွေ့လျားစေနိုင်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံ USA ။ ၁၉၈၈; 1988: 85-5274
ပညာရှိ, RA နှင့် Rompre, PP ဦး နှောက် dopamine နှင့်ဆုလာဘ်။ အမ်းဗြာ Psychol ။ ၁၉၈၉; 1989: 40-191
Pontieri, FE, Tanda, G. အနှင့် Di Chiara, G. သွေးကြောအတွင်းရှိကိုကင်း၊ မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အမ်ဖီတီမီineတို့သည်ကြွက်များ၏နျူကလိယ၏“ အဓိက” နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက“ အခွံ” တွင် extracellular dopamine ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံ USA ။ 1995; 92: 12304-12308
Bassareo, V. နှင့် Di Chiara, G. အ နျူကလိယအတွက်အစားအစာ - လှုံ့ဆော်မှုမှ dopamine ဂီယာ၏ differential ကိုတုန့်ပြန် shell ကို / core ကိုအခန်း accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ ၁၉၉၉; 1999: 89-637
Pecina, အက်စ်, စမစ်, KS နှင့် Berridge, KC ဦး နှောက်ထဲမှာ Hedonic ပူအစက်အပြောက်။ အာရုံကြော။ ၂၀၀၆; 2006: 12-500
Puglisi-Allegra, S. နှင့် Ventura, R. prefrontal / accumbal catecholamine စနစ်သည်မြင့်မားသောစိတ်အားထက်သန်မှုစွမ်းရည်ကိုလုပ်ဆောင်သည်။ Behav Neurosci ရှေ့။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ၆: ၃၁ http://dx.doi.org/10.3389/fnbeh.2012.00031
ဝမ်, GJ, Volkow, ND နှင့် Fowler, JS လူသားများတွင်အစားအစာအတွက်လှုံ့ဆော်မှု၌ dopamine ၏အခန်းကဏ္: - အဝလွန်ခြင်းအတွက်သက်ရောက်မှုများ။ ကျွမ်းကျင်သူထင်မြင်ယူဆချက်။ ၂၀၀၂; 2002: 6-601
McClure၊ SM၊ Daw၊ ND နှင့် Montague, PR တို့ဖြစ်သည် မက်လုံးပေး salience များအတွက်ကွန်ပျူတာအလွှာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Neurosci ။ ၂၀၀၃; 2003: 26-423
ဂျေး, TM Dopamine: Synaptic ပလပ်စတစ်နှင့်မှတ်ဥာဏ်ယန္တရားများအတွက်အလားအလာအလွှာ။ Neurobiol Prog ။ ၂၀၀၃; 2003: 69-375
ကယ်လီ, AE အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု၏ဗဟိုမှမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှု - အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သင်ယူမှု။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2004; 27: 765-776
di Ciano, P. နှင့် Everitt, BJ နျူကလိယအတွက် NMDA နှင့် AMPA / KA receptors ၏ရန်ငြိုးများနှင့်သီးခြားအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်ကိုကင်း - ရှာဖွေသည့်အပြုအမူအပေါ်အဓိကနှင့်အခွံအခိုင်အမာရှိသည်။ Neuropsychopharmacology ။ ၂၀၀၁; 2001: 25-341
ရောင်း, LH နှင့် Clarke, PB amphetamine ဆုကိုခွဲခြားခြင်းနှင့်နျူကလိယအကြား locomotor နှိုးဆွ medial shell ကိုနှင့် core accumbens ။ J ကို Neurosci ။ ၂၀၀၃; 2003: 23-6295
Ito, R. , Dalley, JW, Howes, SR, Robbins, TW နှင့် Everitt, BJ နျူကလိယ၌အေးစက်သော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတွင်ကိုကင်းသည်ကိုကင်းများကိုတုံ့ပြန်မှုနှင့်ကြွက်များတွင်ကိုကင်းကိုရှာဖွေသည့်အပြုအမူစဉ်အတွင်းအဓိကနှင့်အခွံကိုခွန်အားပေးသည်။ J ကို Neurosci ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ 2000: 20-7489
Cheng, JJ၊ de Bruin, JP နှင့် Feenstra, MG နျူကလိယအတွက် Dopamine efflux appetitive ဂန္ထဝင်အေးစက်တုံ့ပြန် shell ကိုနှင့် core ကို accumbens ။ Eur J ကို Neurosci ။ ၂၀၀၃; 2003: 18-1306
Kalivas, PW နှင့် Volkow, nd စွဲ၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ ၂၀၀၅; 2005: 162-1403
Haber, SN, Fudge, JL နှင့် McFarland, NR မျောက်ဝံများအတွက် Striatonigrostriatal လမ်းကြောင်းဟာ dorsolateral striatum ဖို့ shell ကိုတစ်ဦးထံမှတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုလိမ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 2369-2382
Haber, SN အဆိုပါမျော Basal ganglia: အပြိုင်နှင့်ပေါင်းစည်းကွန်ရက်များ။ J ကို Chem Neuroanat ။ ၂၀၀၃; 2003: 26-317
ပါကင်ဆန်, ဂျေအေ၊ Cardinal၊ RN နှင့် Everitt, BJ appetitive အေးစက်အခြေခံ Limbic cortical-ventral striatal စနစ်များ။ Prog ဦး နှောက် Res ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ 2000: 126-263
di Ciano, P. နှင့် Everitt, BJ baso-lateral amygdala နှင့်နျူကလိယအကြားတိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်ကြွက်များအားဖြင့်ကိုကင်းကိုရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုအခြေခံသည်။ J ကို Neurosci ။ 2004; 24: 7167-7173
Hyman, SE နှင့် Malenka, RC စွဲနှင့် ဦး နှောက်: အတင်း၏ neurobiology နှင့်၎င်း၏ဇွဲ။ နတ်ဗြာ Neurosci ။ ၂၀၀၁; 2001: 2-695
Corbit, LH နှင့် Balleine, BW အထွေထွေနှင့် pavlovian- ဆာပလွှဲပြောင်း၏ရလဒ် - တိကျတဲ့ပုံစံများအပေါ် basolateral နှင့်ဗဟို amygdala ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏နှစ်ဆ dissociation ။ J ကို Neurosci ။ ၂၀၀၅; 2005: 25-962
Tomaz, C, Dickinson-Anson, H. နှင့် McGaugh, JL Basolateral amygdala ကိုတွေ့ရှိရပါသည်တစ်ခု inhibitory ရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန် diazepam- သွေးဆောင် anterograde amnesia ပိတ်ဆို့။ proc Natl Acad သိပ္ပံ USA ။ ၁၉၉၂; 1992: 15-3615
Tomaz, C, Dickinson-Anson, H. , McGaugh, JL, Souza-Silva, MA, Viana, MB နှင့် Graeff, EG စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်အပေါ် diazepam ၏လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၏ amygdala အတွက်ဒေသခံ။ Behav ဦး နှောက် Res ။ ၁၉၉၃; 1993: 58-99
မီလ်တန်, AL, Lee က, JL နှင့် Everitt, BJ သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအားဖြည့်ရန်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်လိုအပ်သောအမှတ်တရများကိုပြန်လည်စုစည်းခြင်းသည်β-adrenergic receptors ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ၁၅: ၈၈-၉၂ ဒို http://dx.doi.org/10.1101/lm.825008
Paton, JJ, Belova, MA, Morrison, SE, နှင့် Salzman, CD တို့ဖြစ်သည် အဆိုပါ amygdala မျောက်သင်ယူမှုစဉ်အတွင်းအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှု၏အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောတန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ သဘာဝ။ ၂၀၀၆; 2006: 439-865
ကြည့်ရှုပါ RE, Kruzich, PJ နှင့် Grimm, JW အဆိုပါ basolateral amygdala အတွက် Dopamine, ဒါပေမယ့် glutamate, အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုကင်း - ရှာဖွေနေအပြုအမူမှပြန်ပြောင်း၏ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်အေးစက်ဆုလာဘ် attenuates ။ စိတ်ပညာ။ ၂၀၀၁; 2001: 154-301
Neisewander, JL, O'Dell, LE, Tran-Nguyen, LT, Castaňeda, E. နှင့် Fuchs, RA ကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူမျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကာလအတွင်းနျူကလိယတွင်ဒိုမိုမင်လျှံသည်။ Neuropsychopharmacology ။ ၁၉၉၆; 1996: 15-506
McFarland, K. , Davidge, SB, Lapish, CC ကိုနှင့် Kalivas, PW Limbic နှင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ footshock-သွေးဆောင် reinstatement အခြေခံမော်တာ circuitry ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 1551-1560
Parsegian, အေနှင့်ကြည့်ရှု RE dopamine နှင့် glutamate ကို preregontal cortex နှင့် nucleus တွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည် methamphetamine ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်နှင့်ကြွက်များတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုစဉ်ကာလအတွင်း accumbens ဖြစ်သည်။ J ကို Neurosci ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 2014: 27–2045DOI: http://dx.doi.org/10.1038/npp.2013.231
ဘီးလင်း, ဃ, ဘီးလင်း-Rauscent, အေ, Murray, je နှင့် Everitt, BJ စွဲ: maladaptive မက်လုံးပေးအလေ့အထများထိန်းချုပ်မှု၏ပျက်ကွက်။ Curr ထင်မြင်ချက် Neurobiol ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 2013: 23-564DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.conb.2013.01.025
Bechara, အေ, Damasio, အိပ်ချ်နှင့် Damasio, AR စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် orbitofrontal cortex ။ Cereb Cortex ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ 2000: 10-295
Yin, HH, Knowlton, BJ နှင့် Balleine, BW dorsolateral striatum ၏တွေ့ရှိမှုများကရလဒ်ကိုမျှော်မှန်းသည်ကိုထိန်းသိမ်းသည်။ Eur J ကို Neurosci ။ 2004; 19: 181-189
Yin, HH, Ostlund, SB, Knowlton, BJ နှင့် Balleine, BW ဆာပအေးစက်အတွက် dorsomedial striatum ၏အခန်းကဏ္.ကို။ Eur J ကို Neurosci ။ ၂၀၀၅; 2005: 22-513
Faure, အေ, Haberland, U. , Conde, အက်ဖ်နှင့်အယ်လ် Massioui, N. အဆိုပါ nigrostriatal dopamine စနစ်မှတွေ့ရှိရပါသည်နှိုးဆွ - တုံ့ပြန်မှုအလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးနှောင့်အယှက်။ J ကို Neurosci ။ ၂၀၀၅; 2005: 25-2771
ဘီးလင်း, ဃနှင့် Everitt, BJ ကိုကာကိုလာရှာဖွေသည့်အလေ့အထသည် dopamine-dependial serial connection ပေါ်တွင်မူတည်ပြီး ventral ကို dorsal striatum နှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။ Neuron ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ 2008: 57-432DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2007.12.019
Koob, gf အဆိုပါ amygdala နှင့်စွဲအတွက် ဦး နှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ။ Brain Res ။ 2009; 1293: 61-75DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2009.03.038
Koob, gf စွဲစွဲလမ်းမှုကဆုလာဘ်လိုငွေပြမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့စိတ်ရောဂါ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ၄း၇၂ http://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2013.00072
Jennings, JH, Sparta, DR၊ Stamatakis, AM, Ung, RL, Pleil, KE, Kash, TL et al ။ ကွဲပြားခြားနားစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များများအတွက်ကွဲပြားတိုးချဲ့ amygdala ဆားကစ်။ သဘာဝ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 2013: 496-224DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nature12041
Stamatakis, AM, Sparta, DR, Jennings, JH, McElligott, ZA, Decot, H. နှင့် Stuber, GD amygdala နှင့် stria terminalis circuitry ၏အိပ်ရာနျူကလိယ: စွဲ -related အပြုအမူများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neuropharmacology ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 2014: 76-320DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropharm.2013.05.046
LeMoal, အမ်နှင့် Koob, GF မူးယစ်ဆေးစွဲ - ရောဂါသို့လမ်းကြောင်းနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒအမြင်။ Eur Neuropsychopharmacol ။ ၂၀၀၇; 2007: 17-377
Ventura, R. , Morrone, C နှင့် Puglisi-Allegra, S. Prefrontal / accumbal catecholamine စနစ်သည်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အဓိကအားဖြင့်စိတ်အားထက်သန်မှုအားဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံ USA ။ ၂၀၀၇; 2007: 104-5181
ကယ်လီ, AE နှင့် Berridge, KC သဘာဝဆုကျေးဇူးများ၏အာရုံကြောသိပ္ပံ: စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဆက်စပ်မှု။ J ကို Neurosci ။ ၂၀၀၂; 2002: 22-3306
Berner, LA, Bocarsly, ME, Hoebel, BG နှင့် Avena, NM Baclofen သည်အဆီအစစ်အသင့်အတင့်စားခြင်းကိုတားဆီးသော်လည်းသကြားဓာတ်ကြွယ်ဝသောသို့မဟုတ်ချိုသောအဆီဓာတ်မဟုတ်ပါ။ Behav Pharmacol ။ 2009; 20: 631-634DOI: http://dx.doi.org/10.1097/FBP.0b013e328331ba47
Latagliata, EC, Patrono, အီး, Puglisi-Allegra, အက်စ်နှင့် Ventura, R. အန္တရာယ်ရှိသောအကျိုးဆက်များရှိသည့်ကြားမှစားနပ်ရိက္ခာသည် prefrontal cortical noradrenergic ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ BMC Neurosci ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ၈: ၁၁-၁၅ ဒို http://dx.doi.org/10.1186/1471-2202-11-15
Avena, မိုင်, Rada, P. နှင့် Hoebel, BG သကြားစွဲချက်အတွက်အထောက်အထား - ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း၊ အလွန်အကျွံသကြားဓာတ်သုံးစွဲမှု၏အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2008; ၃၂း၂၀-၃၉
Bancroft, ဂျေနှင့် Vukadinovic, Z. လိင်စွဲလမ်းမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ သီအိုရီမော်ဒယ်တစ်ခုဆီသို့။ J Sex Res ။ 2004; 41: 225-234
Petry, မိုင် စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူအတိုင်းအတာကိုလောင်းကစားဝိုင်းတွင်ထည့်ရန်ကျယ်ပြန့်သင့်သလား။ စွဲ။ ၂၀၀၆; 2006: 101-152
Ziauddeen၊ H. , Farooqi, IS နှင့် Fletcher, PC တို့ဖြစ်သည် အဝလွန်ခြင်းနှင့် ဦး နှောက် - စွဲလမ်းမှုပုံစံသည်မည်မျှယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သနည်း။ နတ်ဗြာ Neurosci ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ၁၃: ၂၇၉–၂၈၆ ဒို http://dx.doi.org/10.1038/nrn3212
Avena, မိုင်, Rada, P. , Moise, N. နှင့် Hoebel, BG အရက်အလွန်အကျွံသောက်သည့်အချိန်တွင်အစာစားခြင်းအားတားဆီးသောသcrucus shop သည် dopamine ကိုထပ်တလဲလဲထုတ်လွှတ်ပြီး acetylcholine စိတ်ကျေနပ်မှုတုံ့ပြန်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ ၂၀၀၆; 2006: 139-813
Lenoir, အမ်, Serre, အက်ဖ်, Cantin, အယ်လ်နှင့် Ahmed က, အက်စ် ပြင်းထန်သောအရသာသည်ကိုကင်းအကျိုးကိုသာလွန်သည်။ PLOS ONE ။ ၂၀၀၇; 2007: e2
ဝမ်, GJ, Volkow, ND, Telang, အက်ဖ်, ဂျိန်း, အမ်, Ma, ဂျေ, Rao က, အမ် et al ။ အစားအစာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်လူ့ ဦး နှောက်ကိုသိသာထင်ရှားစေသည်။ Neuroimage ။ 2004; 21: 1790-1797
Deroche-Gamonet, V. , Belin, D. နှင့် Piazza, PV ကြွက်များတွင်စွဲကဲ့သို့အပြုအမူများအတွက်အထောက်အထား။ သိပ္ပံ 2004; 305: 1014-1017
Gilpin, NW နှင့် Koob, GF အရက်မှီခိုမှု၏ Neurobiology: လှုံ့ဆျောမှုယန္တရားများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ Alcohol Res ကျန်းမာရေး။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ 2008: 31-185
Gilpin, NW နှင့် Koob, GF β-adrenoceptor ရန်သက်ရောက်မှုများအရက် - မှီခိုကြွက်များအားဖြင့်အရက်သောက်ခြင်း။ စိတ်ပညာ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ 2010: 212-431DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00213-010-1967-8
Vanderschuren, LJ နှင့် Everitt, BJ ကြာရှည်စွာကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းသည်မဖြစ်မနေဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ 2004; 305: 1017-1019
Heyne, A. , Kiesselbach, C. , နှင့်Sahùn, I. compulsive အစားအစာ - ယူအပြုအမူတစ်ခုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ စွဲ Biol ။ 2009; 14: 373-383DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1369-1600.2009.00175.x
Corwin, RL, Avena, NM နှင့် Boggiano, MM အစာကျွေးခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်: အရက်မူးစားခြင်း၏ကြွက်သုံးမော်ဒယ်များမှအမြင်များ။ Physiol Behav ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ 2011: 104-87DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2011.04.041
LeMerrer, ဂျေနှင့် Stephens, DN အစားအစာ - သွေးဆောင်အပြုအမူဆိုင်ရာ sensitization, ကိုကင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်မှ Cross-sensitization၊ ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Neurosci ။ ၂၀၀၆; 2006: 26-7163
Duarte, RBM, Patrono, အီး, Borges, AC, César, AAS, Tomaz, C. , Ventura, R. et al ။ အလွန်အာဟာရရှိသောအစားအစာကိုစားသုံးခြင်းသည် marmoset မျောက်များအတွင်းတည်မြဲသောမှတ်ဥာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Behav လုပ်ငန်းစဉ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 2014: 107-163DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.beproc.2014.08.021
Duarte, RBM, Patrono, အီး, Borges, AC, Tomaz, C တို့, Ventura, R. , Gasbarri, အေ et al ။ အမြင့် / အနိမ့်အဆီ / သကြားအစာသည်အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း marmoset မျောက်များ၏ cortisol တုန့်ပြန်မှုသည်အခြေအနေတစ်ခု - ဦး စားပေးလုပ်ငန်းတွင်မဟုတ်ပါ။ Physiol Behav ။ ၂၀၁၅; 2015: 139-442DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2014.11.065
Patrono, အီး, Di Segni, အမ်, Patella, အယ်လ်, Andolina, D. , Valzania, အေ, Latagliata, EC et al ။ ဘယ်အချိန်မှာချောကလက်ရှာကြံမဖြစ်မနေဖြစ်လာသည်: ဗီဇ - ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်စပ်မှု။ PLOS ONE ။ ၂၀၁၅; 2015: e10DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0120191
Hoebel, BG, Avena, NM, Bocarsly, ME, Rada, P. သဘာ ၀ စွဲလမ်းမှု - ကြွက်များတွင်သကြားစွဲလမ်းမှုအပေါ်အခြေခံသည့်အမူအကျင့်နှင့်တိုက်စားခြင်းပုံစံ။ J ကိုစွဲ Med ။ 2009; ၃: ၃၃–၄၁ ဒို http://dx.doi.org/10.1097/ADM.0b013e31819aa621
Kenny, PJ အဝလွန်ခြင်းအတွက်ဆုလာဘ်ယန္တရားများ: အသစ်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်။ Neuron ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ 2011: 69-664DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2011.02.016
Bulik, CM အစာစားခြင်းရောဂါများအတွက်မျိုးဗီဇ - ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်စပ်မှုကိုစူးစမ်း။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု Neurosci ။ ၂၀၀၅; 2005: 30-335
ကမ့်ဘဲလ်, IC, စက်, ဂျေ, Uher, R. နှင့် Schmidt က, U. အစားအသောက်မူမမှန်မှုများ၊ Neurosci Biobehav ဗျာ 2010; 35: 784-793DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2010.09.012
Volkow, ND, မုဆိုး, JS, ဝမ်, GJ, Baler, R. နှင့် Telang, အက်ဖ် မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတွင် dopamine ၏အခန်းကဏ္ကိုပုံဖော်ပေးခြင်း။ Neuropharmacology ။ 2009; ၅၆: ၃–၈ ဒို http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropharm.2008.05.022
di Segni, အမ်, Patrono, အီး, Patella, အယ်လ်, Puglisi-Allegra, အက်စ်နှင့် Ventura, R. compulsive စားအပြုအမူ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ။ အာဟာရဓာတ်။ ၂၀၁၅; ၆: ၄၅၉၁–၄၆၀DOI: http://dx.doi.org/10.3390/nu6104591
Berke က, JD cortical-striatal ကွန်ယက်များတွင်မြန်ဆန်လှိုအကျိုးဖြစ်ရပ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများအောက်ပါကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲ။ Eur J ကို Neurosci ။ 2009; 30: 848-859DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-9568.2009.06843.x
Ren, X တို့၊ Ferreira, JG, Zhou, L. , Shammah-Lagnado, SJ, Jeckel, CW နှင့် de Araujo, IE အရသာ receptor အချက်ပြ၏မရှိခြင်းအတွက်အာဟာရရွေးချယ်ရေး။ J ကို Neurosci ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ 2010: 30-8012DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5749-09.2010
Wiltschko, AB, Pettibone, JR နှင့် Berke, JD striatal အစာရှောင်ခြင်း - spiking interneurons အပေါ် stimulant နှင့် antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ 2010: 35-1261DOI: http://dx.doi.org/10.1038/npp.2009.226
Cacciapaglia, အက်ဖ်, Wightman, RM နှင့် Carelli, RM လျင်မြန်သော dopamine အချက်ပြမှုသည်ကွဲပြားခြားနားသော microcircuits များအား modules modus အတွင်း sucrose သို့တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားသည့်အပြုအမူအားပြောင်းလဲစေသည်။ J ကို Neurosci ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ 2011: 31-13860DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1340-11.2011
Shimura, T. , Imaoka, H. , Okazaki, Y. , Kanamori, Y. , Fushiki, T. နှင့် Yamamoto, T. palatability- သွေးဆောင်စားသုံးမှုအတွက် mesolimbic စနစ်၏ပါဝင်မှု။ Chem Senses ။ ၂၀၀၅; 2005: i30-i188
Nishijo, အိပ်ချ်, Uwano, တီ, Tamura, R. နှင့် Ono, T. နိုးထနေသောကြွက်များတွင်အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုများကိုလျက်နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်း amygdala တွင်စိတ်ရောဂါနှင့် multimodal တုံ့ပြန်မှုများ။ J ကို Neurophysiol ။ ၁၉၉၈; ၇၉း၂၁-၃၆
Nishijo, အိပ်ချ်, Uwano, တီနှင့် Ono, တီ ဦး နှောက်တွင်အရသာလှုံ့ဆော်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Chem Senses ။ ၂၀၀၅; 2005: i30-i174
Matsumoto, ဂျေ, Urakawa, အက်စ်, Hori, အီး, က de Araujo, MF, Sakuma, Y. , Ono, T. et al ။ နျူကလိယရှိအာရုံကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများသည်ကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြုနေစဉ် shell သည် accumbens J ကို Neurosci ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ 2012: 32-1672DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5140-11.2012
Meredith, GE နျူကလိယ accucens အတွက်ဓာတုအချက်ပြများအတွက် Synaptic မူဘောင်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ ၁၉၉၉; 1999: 877-140
Tepper, JM နှင့် Plenz, D. striatum ရှိမိုက်ကရိုဝိုက်များ: striatal cell အမျိုးအစားများနှင့်၎င်းတို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု။ in: S. Grillner, AM Graybiel (Eds) Microcircuits: အာရုံခံနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုကြားရှိမျက်နှာပြင်။ MIT, ကိန်းဘရစ်; 2006: 127-148
Lansink, CS, Goltstein, PM, Lankelma, JV နှင့် Pennartz, CM ကြွက် ventral striatum ၏လျင်မြန်စွာ - spiking interneurons: ကျောင်းအုပ်ကြီးဆဲလ်တွေနဲ့လှုပ်ရှားမှု၏ယာယီညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှု။ Eur J ကို Neurosci ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ 2010: 32-494DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-9568.2010.07293.x
Piazza, PV နှင့် Deroche-Gamonet, V. စွဲမှအကူးအပြောင်း၏ multistep ယေဘုယျသီအိုရီ။ စိတ်ပညာ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 2013: 229-387DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00213-013-3224-4
Greba, ဆိုးကျိုး, Gifkins, အေနှင့် Kokkinidis, L. amygdaloid dopamine D2 receptors ကိုတားစီးခြင်းသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စေသောတိုင်းထွာမှုနှင့်တိုင်းတာသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာသင်ယူမှုကိုအားနည်းစေသည်။ Brain Res ။ ၂၀၀၁; 2001: 899-218
Guarraci, အက်ဖ်အေ, Frohardt, RJ, လူငယ်, SL နှင့် Kapp, BS အေးစက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်စဉ်အတွင်း amygdala အတွက် dopamine ဂီယာများအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္။ ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ ၁၉၉၉; 1999: 877-732
Rosenkranz, ဂျေအေနှင့်ဂရေ့, AA ကို infralimbic နှင့်ပဏာမ prefrontal cortical တားစီးနှင့် vivo အတွက် basolateral amygdala အာရုံခံ၏ dopaminergic မော်ဂျူ၏ဆယ်လူလာယန္တရားများ။ J ကို Neurosci ။ ၂၀၀၂; 2002: 22-324
Dumont, EC နှင့် Williams, JT Noradrenaline သည် stria terminalis ၏အိပ်ခြင်းနျူကလိယ၏ GABAA တားစီးမှုကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းသည် ventral tegmental toရိယာသို့ရောက်ရှိနေသောအာရုံခံများ။ J ကို Neurosci ။ 2004; 24: 8198-8204
Smith, RJ နှင့် Aston-Jones, G. တိုးချဲ့ amygdala အတွက် Noradrenergic ဂီယာ: အချိန်ကြာမြင့်စွာမူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနေစဉ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းနှင့် relapse တိုးမြှင့်အတွက်အခန်းကဏ္။ ။ ဦး နှောက် Struct Funct ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ 2008: 213-43DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00429-008-0191-3
Ventura, R. , Cabib, အက်စ်, Alcaro, အေ, Orsini, C. နှင့် Puglisi-Allegra, အက်စ် အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက် norepinephrine amphetamine- သွေးဆောင်ဆုလာဘ်နှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန် mesoaccumbens များအတွက်အရေးပါသည်။ J ကို Neurosci ။ ၂၀၀၃; 2003: 23-1879
Ventura, R. , Alcaro, A. နှင့် Puglisi-Allegra, S. prefrontal cortical norepinephrine လွှတ်ပေးမှုနျူကလိယ accumbens အတွက်မော်ဖင်းအကိုက် - သွေးဆောင်ဆုလာဘ်, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်အရေးပါသည်။ Cereb Cortex ။ ၂၀၀၅; 2005: 15-1877
ဗန် der Meulen, JA, Joosten, RN, de Bruin, JP နှင့် Feenstra, MG အမှတ်စဉ်ပြောင်းပြန်နှင့်ဆာပရည်မှန်းချက် - ညွှန်ကြားအပြုအမူမျိုးသုဉ်းစဉ်အတွင်း medial prefrontal cortex အတွက် Dopamine နှင့် noradrenaline efflux ။ Cereb Cortex ။ ၂၀၀၇; 2007: 17-1444
Mitrano, DA, Schroeder, JP, Smith, Y. , Cortright, JJ, Bubula, N. , Vezina, P. et al ။ α-1 adrenergic receptors ကိုနျူကလိယမှ presynaptic ဒြပ်စင်များပေါ်တွင်နေရာချထားပြီး mesolimbic dopamine ဂီယာကိုထိန်းညှိပေးပါတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ 2012: 37-2161DOI: http://dx.doi.org/10.1038/npp.2012.68
Stevenson, CW နှင့် Gratton, အေ နျူကလိယ၏ Basolateral amygdala မော်ဂျူစိတ်ဖိစီးမှုမှ dopamine တုံ့ပြန်မှု accumbens: အ medial prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္.ကို။ Eur J ကို Neurosci ။ ၂၀၀၃; 2003: 17-1287
Floresco, SB နှင့် Tse, MT အဆိုပါ basolateral amygdala-prefrontal cortical လမ်းကြောင်းအတွက် inhibitory နှင့် excitatory ဂီယာ၏ Dopaminergic စည်းမျဉ်း။ J ကို Neurosci ။ ၂၀၀၇; 2007: 27-2045
Ito, R. နှင့် Canseliet, အမ် Amphetamine ထိတွေ့မှုက Hippocampus-dependant spatial learning ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး amygdala-dependant cue သင်ယူမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ 2010: 35-1440DOI: http://dx.doi.org/10.1038/npp.2010.14